Iindlela ezi-7 zokunyusa ukuThengiswa kweeholide kwiNtengiso | Martech Zone
Sinikezele ngetoni yolwazi kwangoko namhlanje Ukuthengiswa kweeholide kunye nemihla enxulumene nayo, uqikelelo kunye neenkcukacha-manani, ngoku sifuna ukwabelana nge-infographic ngendlela onokuzisebenzisa ngayo ezo ndlela zokunyusa ukuguqulwa kwe-intanethi ngexesha leholide.
Lixesha lonyaka kwakhona! I-frenzy yokuthenga iholide sele iza kuqala. ShortStack ujikeleze iqela lamanani (25!) malunga neendlela zokuthenga, kunye nokudibanisa iimbono ezimbalwa zeMikhankaso eziya kukunceda unxibelelane nabalandeli bakho kunye nabalandeli kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Kusekho ixesha elininzi lokufumana izipho emnyango ngoko ngoku lixesha lokubonelela ngephulo ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala!
Ngaba ufuna ukugcina iindleko zokuhambisa ngenqanawa? Njani ngokunikezela ngesaphulelo kubathengi abafuna njalo Phakamisa ukuthenga kwabo kwivenkile yakho?
Nika inkuthazo ngeendaba zosasazo eziheha uluntu lwakho Rhuma nge-imeyile ke unokutyhala unikezelo kulo lonke ixesha lonyaka.
Ngoku ukuba unazo ezo imeyile, cwangcisa i nikela usuku ngalo lonke ixesha leeholide.
Thatha isithuba se amagumbi okubonisa kunye nokubonelela ngeselfowuni-kuphela yokugcina ukuthengwa kwivenkile yakho!
Ukuthetha ngeselula, qiniseka ukuhambisa amatikiti alungele ukuhanjwa neselfowuni. Iiklabhu zokuthumela imiyalezo iseyindlela elungileyo yokutyhala izaphulelo kubathengi bakho, qala enye kwaye unikeze amatikiti kuzo zonke iiholide.
Thatha ithuba lokuthenga kwaye uqale ixesha elide sweepstakes Ababhalisi bakho be-imeyile ukuze bahlale bebhalisile kwaye basebenze kwi-imeyile oyithumelayo.
tags: izaphuleloukuhanjiselwa ngenqanawe mahalaukuthengiswa kweeholideukuthenga iholidephucula ukuthengisaukwandisa ukuthengisaisigqebhezana esiphathwayoumnikelo oshukumayonikela usukukuthengwa kwi intanethithatha izaphuleloukubonisasweepstakes
Imihla ephambili kunye nezibalo kufuneka wazi ukuba sisihloko kwixesha leholide lika-2014